Hirdankii iyo Shirkii Golaha Dhexe ee Xisbiga Kulmiye oo la Filayo in uu Bilaabmo Bilaha soo socda+Musharaxiinta Taagan yaa ka mid ah Akhriso Xogog | Gabiley News Online
Hirdankii iyo Shirkii Golaha Dhexe ee Xisbiga Kulmiye oo la Filayo in uu Bilaabmo Bilaha soo socda+Musharaxiinta Taagan yaa ka mid ah Akhriso Xogog
July 15, 2015 - Written by admin
Hargeysa(Haldoornews)-Shirka golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee KULMIYE ayaa la filayaa inuu qabsoomo bisha September ee sannadkan 2015.
Shirkan golaha dhexe ee xisbigan oo ah mid xaasaasi ah, waxa si rasmi ah loogu dooran doonaa murashixiinta Madaxweynaha iyo ku xigeenka u meteli doona xisbiga doorashada soo socota ee madaxtooyada. Inkastoo uu Madaxweyne Siilaanyo hore u sheegay inuu yahay murashaxa xisbiga, haddana warar soo baxaya ayaa tilmaamaya inaanu Madaxweynuhu doorasho dambe u tartami doonin oo uu ka tanaasuli doono murashaxnimada Madaxweynenimo. Sidaas daraadeed waxa la filayaa inuu loolan adagi dhex maro siyaasiyiinta ku bahoobay xisbiga KULMIYE. Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda md. Maxamed Biixi Yoonis oo labaduba hore u sheegay inay murashixiinta xisbiga noqon doonaan Madaxweyne Siilaanyo ka dib, ayaa la saadaalinayaa inuu loolanka ugu adagi dhex mari doono.
Wasiirkii hore ee maaliyadda md. Cabdicasiis Maxamed Samaale oo isaguna hore u cadeeyay inuu ka mid noqon doono murashixiinta Madaxweynaha, marka uu Madaxweyne Siilaanyo baneeyo ayaa la filayaa inaanu isaguna ka mid noqon doono murashixiinta. Caqabada ugu culus ee baajin karta murashaxnimadii Cabdicasiis Samaale ee Madaxweynaha ayaa ah is casilaadii uu kaga dhex baxay xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo. Hase yeeshee Cabdicasiis Samaale oo ka tirsan guddiga fulinta xisbiga KULMIYE ayaa la filayaa inuu taageero u muujiyo mid ka mid siyaasiyiinta uu loolanku ka dhexeeyo.
Kursiga murashaxa madaxweyne-xigeenka, ilaa hadda ma jirto cid muuqata oo uu tartan ka dhexeeyo, sidoo kalena lama hubo in madaxweyne-xigeenka wakhtigani Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici uu noqon doono murashax madaxweyne-xigeen ee xisbiga, mar haddii uu Madaxweyne Siilaanyo ka tanaasulo murashaxnimada. Sidoo kalena lama hubo haddii uu Madaxweyne Siilaanyo tanaasulo in Md. Saylici uu ka mid noqon doono murashixiinta madaxweynaha ee xisbiga iyo inuu halkan uu maanta joogo ku negaan doono. Hase yeeshee Md. Saylici oo tartanka xisbiga dhexdiisa kaga qayb gala murashax madaxweyne-xigeen, maadaama oo uu kursiga ku fadhiyo, waxa ay keeni doontaa culays siyaasadeed oo uu ku taageeri karo hadba ninka uu taageero ee uu la doonayo inuu noqdo murashax madaxweyne.
Waxa la eegi doonaa in tartanka siyaasiyiinta KULMIYE ka dhex dhacaa, uu sii xoojin doono midnimadii xisbiga iyo inuu ku keeno tafaraaruq siyaasadeed.
Mid kasta oo kamid ah murashixiintan muuqda ee KULMIYE iyo kuwo kale oo soo baxaaba waxa ay la tartami doonaan murashax madaxweyne ee UCID Jamaal Cali Xuseen iyo ku xigeenkiisa Cabdirashiid Xasan Mataan iyo sidoo kale murahaxa madaxweyne ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo ku xigeenkiisa oo aan isna weli la calaamadin.
Source :- Geeska